पुरुषको विर्य दैनिक फाल्नु असर कि फाइदा ? नफाल्दा सेक्स पावर बढ्छ ! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
प्रकाशित मिति : आइतवार, अशोज १४, २०७५
पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने, धारा छुट्दा छरिएर जाने आदी समस्या छ रु अथवा, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्याले सताउँछ र यी मध्ये कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने सोच्नुस तपाइको प्रोस्टेट ग्रन्थी ९पुरुष प्रजनन ग्रन्थी०मा सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ ।
चिकित्सकका अनुसार पछिल्लो समयमा अधिकांश पुरुषमा यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जकाका युरोलोजिस्ट तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्राडा उत्तम शर्माले यस्तो रोगमा खासगरी यौनशक्तिमा कमी आएको महसुस हुने, पिसाब गर्न बल गर्नुपर्ने, राति पिसाब गर्न पटकपटक उठ्नुपर्ने, पिसाब लागेपछि रोक्न नसक्ने, नाइटोदेखि अण्डकोषको भाग दुख्ने, मलद्वारदेखि अण्डकोषसम्मको भाग दुख्ने, पिसाब ननिख्रनेजस्तो हुने वा पिसाब लागिरहेकोजस्तो हुने तर फेर्न जाँदा नआउनेजस्ता लक्षण देखिने बताए ।
प्रोस्टेट ग्रन्थीको मुख्य काम वीर्य स्वस्थ राख्ने र त्यसलाई हुर्काउन मदत गर्ने हो । वीर्य त्यतिबेला नियमित उत्पादन भइरहन्छ जतिबेला खर्च हुन्छ । जब वीर्य खर्च हुन छाड्छ अर्थात् स्थिर रुपमा रहन्छ त्यसपछि समस्या देखिन थाल्छ ।
अझ सजिलो गरी बुझ्दा दुई बाल्टीमा पानी भरौँ एउटाको पानी नियमित फेरौँ तर अर्कोमा नफेरौँ । एक महिनापछि हेर्दा दिनहुँ फेरेको बाल्टीको पानी सफा हुन्छ भने अर्कोमा भने नफेरिँदा लेउ लाग्न थाल्छ । हो त्यस्तै हो वीर्य र प्रोस्टेट ग्रन्थीको सम्बन्ध पनि । जति वीर्य निस्क्यो उति नै प्रोस्टेटलाई फाइदा हुन्छ,’ डा। रौनियारले भने ।